TTSweet: မြန်မာစာသင်ကြား ဟာသများ
ညအိပ်ချိန်ရောက်ပြီ။ အိပ်ရာထဲဝင် မီးပိတ်ပြီးပေမဲ့ ဂျူဂျူတစ်ယောက် အိပ်မပျော်သေး။ အိပ်မပျော်တော့ အမေလုပ်သူကို တောင်ရောက်မြောက်ရောက် ထွေရာလေးပါး လျှောက်ပြောနေသည်။ သင်ထားတဲ့ မြန်မာစာတွေ ပြန်ပေါင်းချင် ပေါင်းနေတတ်သည်။
ခုလဲ ဟိုတစ်လောက သင်ထားသည့် "အန့် ... အန် ... အန်း ... " ကို ပြန်ပေါင်းကြည့်ရင်း "နန့် " ဆိုသည့်နေရာကျတော့ အမေကို မေးသည်။
"မေမေ 'နန့် ' ဆိုတာ ရှိလားဟင် ..."
တချို့ မြန်မာ စာလုံးပေါင်းများ ရှိပေမဲ့ အဓိပါယ် ဆိုလိုရင်း မရှိဘူးဆိုတာ ရှင်းပြဖူးတော့ "နန့် " ဆိုသော စကားလုံး၏ အဓိပါယ်ကို မေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
" ရှိတာပေါ့ သမီးရဲ့ ... နန့်ဆိုတာ .. နန့်တာ ... အင်းးးးး .... နန့်ကြောထတာ ... ကို ပြောတာ .."
" ဘာလဲဟင် ... နန့်ကြောထတယ် ဆိုတာ ..."
" အင်း .... နန့်ကြောထတယ်ဆိုတာ ... ကမြင်းကြောထတာ ... ဆတ်စလူးခါတာ အတူတူပဲ ..."
" ဟင် မေမေပြောတာတွေ ဂျူဂျူဘာမှ နားမလည်ဘူး ... မေမေရော နန့်ကြောထလား ဟင် ..."
သူပြောမှ ရယ်လိုက်ရတာ ...ဒီအရွယ်ကြီး နန့်ကြောထလားဆိုတော့ ဘာပြောရမှန်းမသိ ..
"ခုတော့ မထပါဘူး သမီးရယ် ... ငယ်ငယ်ကတော့ ထခဲ့ မလား မသိ ... "
ဟီးဟီး ... ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြောပြီး ရယ်လိုက်ရတာ။
" အဲဒါဆို ဘယ်သူ နန့်ကြောထသေးတုံး ... ဂျူဂျူထသလား ...."
" ငါးသမီးလေးက မထပါဘူး ..."
" အဲဒါဆို ဘုတ်စု ထသလား ... "
ရန်ကုန်က အင်မတန် အဆော့မက်သော မျောက်ရှုံးအောင်ဆော့သော သူ့ညီမ ၀မ်းကွဲ ကို မေးခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့အမေကတော့ သူ့သမီးကို ဆီဖူးခါသည်ဟု အမြဲပြောသည်။
" အင်း ... ဘုတ်စုက နဲနဲတော့ ထတယ် ထင်တာပဲ ..."
" အင်း ... ငါ့သမီးလဲ နဲနဲတော့ထတာပဲ ... ညည်းတိ်ု့တွေ တူတူပဲပါပဲအေ ..."
ဤသို့ဖြင့် နန့်ကျောထခြင်း ဆိုသော အဓိပါယ်ကို ဂျူဂျူတို့ သဘောပေါက်သွားလေသတည်း။
အန်တီဆွိသည် ဂျူဂျူလေးကို မြန်မာစာသင်ပေးနေသည်။
ယနေ့ရောက်နေသော သင်္ခန်းစာသည် ရရစ်နှင့် ယပင့်ကို သင်ပေးသည့် သင်္ခန်းစာ ဖြစ်သည်။ "ကျ ကျာ ကျား .... " "ကျိ ကျီ ကျီး .." အစရှိသဖြင့် သင်ပေးပြီး အောက်က ပုံလေးတွေကို လိုက်ဖတ်ခိုင်းနေသည်။ ဂျူဂျူသည် အထစ်အငေါ့မရှိ ဖတ်နိူင်သည်။
အမေကြီးမှာ ၀မ်းသာလို့။ အဟုတ်ပဲ ဂျူဂျူတို့ ဖတ်တာ မြန်ချက်ပေါ့။ ဟယ် ငါ့သမီးလေးက တစ်ခါပဲ သင်ရသေးတယ် ဖတ်တတ်လိုက်တာဆိုတော့ ဘာပြောတယ် ထင်တုံး။
ဂျူဂျူက အရုပ်လေးတွေ ကြည့်ပြီး ပြောတာ တဲ့ဗျား။
ဒါနဲ့ အောက်က အရုပ်မပါတဲ့ စာတွေ ပေါင်းဖတ်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့။
"သဝေထိုးကကြီး ... ယပင်... ကျေ ။ ၀တ်ဆံနှစ်လုံးပေါင်း ကျေး ... ဇကွဲရေးနှစ်ချောင်းငင် ဇူး .... ကျေးဇူး " တဲ့
ပျံသန်း တဲ့ ...
ပျံသန်း နေရာလဲရောက်ရော ဂျူဂျူကအဓိပါယ် နားမလည်တော့ ရှင်းပြရတယ်။
သမီးရဲ့ မြန်မာစာမှာ စကားပြောတာနဲ့ စာရေးတာ ဆိုတာ ရှိတယ်။ ပြောရင်တော့ အလွယ်ပဲ "ပျံတယ်" ။ အင်္ဂလိပ်လိုဆို fly ပေါ့။ အဲဒါကို မြန်မာလို စာနဲ့ရေးတော့ လှအောင် "ပျံသန်း" လို့ ပြောတယ်။ "ပျံ "ဆိုတာနဲ့ အတူတူပဲ။ ငှက်တွေ ပျံတယ် ... ယင်ကောင် ပျံတယ် ... တူတူပဲ။
ဟော နောက်တစ်လုံးကျ "ပြီးစီး" တဲ့။
အဲဒါလဲ တူတူပဲ ... စာရေးရင် "ပြီးစီးသည် " လို့ ရေးတယ်။ .... ပြောရင် "ပြီးတယ် " ပေါ့။
နောက်တော့ " ဖြေကြား " ။ အဲဒါကလဲ " ဖြေ" နဲ့ တူတူပဲ။
ဟော ... ဟော နောက်တစ်လုံးကျ
" ချီးကျူး " တဲ့
စာရှင်းပြနေတဲ့ အမေကြီး ဒုက္ခရောက်ပါလေရော။ ချီးကျူးကျတော့ အဲဒါလဲ ရှေ့က "ချီး " နဲ့ အတူတူပဲလို့ ပြောမလို့ဟာကနေ .... အဲဒါကျ ချိ ... ချိ ... ချီးနဲ့မတူဘူး သမီးရေ ... ဆို ပြောင်သလို နောက်သလို ပြောတော့ ဂျူဂျူလေးမှာ ရယ်လိုက်တာ။
ခုချိန်ထိ စာသင်တိုင်း အဲဒီ "ချီးနဲ့ မတူဘူး " ဆိုတာ ပြောပြီး ရယ်တုံး။ အော် မြန်မာ စကားများ ...
Labels: ပြုံးရယ်စရာ ... နဲ့ အလွဲများ ..., ရှုမငြီးတဲ့ ချစ်သမီး လေး ..., ဟိုရောက်ဒီရောက် ...
ဇွန်မိုးစက် February 1, 2013 at 1:47 PM
chocothazin February 1, 2013 at 1:58 PM
တီတီဆွိ တော်တယ် .. ဂျူဂျူလေးကလည်း မြန်မာစာကို လိုလိုလားလား သင်ချင်တယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသားမိတယ်။
တချို့ကလေးတွေက မသင်ချင်ကြတော့ဘူးလို့ ကြားတော့ စိတ်တောင်မကောင်းဘူးဖြစ်မိတယ်။
ဘာပဲပြောပြော သူ့အမေကြီးရော ဂျူဂျူလေးကိုရော ချီးကျူး ပါတယ်း))
T T Sweet February 1, 2013 at 2:13 PM
စင်္ကာပူမှာနေတုံးကတော့ တရုတ်စာရော အင်္ဂလိပ်ရော သင်ရတော့ မြန်မာစာပါ ထပ်သင်ရင် ခလေး ပရက်ရှာ များသွားမစိုးလို့။ တရုတ်စာ တစ်ခုကတင်ကို တော်တော် ခက်နေပြီကိုး။ ဒီရောက်တော့ ပထမပိုင်း တရုတ်စာ တက်သေးတယ်။ နောက် တော့ သင်တဲ့ဆရာမ မကောင်းလို့ဆို တရုတ်တွေပါ ထွက်ကုန်လို့ သမီးကိုပါ ထုတ်လိုက်တော့တယ်။ လူတစ်ယောက် အနည်းဆုံး language ၂ခုလောက်တော့ တတ်သင့်တယ်လို့ယူဆလို့ ကိုယ်သင်ပေးနိူင်တဲ့ မြန်မာစာလေး တတ်အောင်သင်ပေးနေရတာ ။ သမီးကလဲ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ သူ သင်ရတာ ပျော်ပါတယ်။ အဲလို အမေက ပေါက်ကရတွေ ဟာသတွေ လုပ်နေတော့ သူက ပျော်တယ်။ နောက်ပြီး သူမြန်မာစာ သင်တာတဲ့ အမေရေးတဲ့ ဘလော့ဖတ်ချင်လို့တဲ့။ အဲဒါလဲ တွင်တွင် ပြောသေးသဗျား။
ဆုမြတ်မိုး February 1, 2013 at 2:36 PM
အမေကြီးစမတ် ဂျူဂျူးလေးစမတ်...း) နောက်ကျရင် ဂျူ၈ျူးလေးဘလော့လည်းရှိရင်ရှိလာမှာနော်..။ မြန်မာစာဖတ်တတ်လို့ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်းပါ ဂျူဂျူးလေးရယ်း) အများကြီးဖတ်တတ်အောင်ကြိုးစားနော်
ကောင်းလိုက်တာ tsweet ရယ်။ရီလဲရီလိုက်ရတာ။tsweet ကိုဂျူဂျူ ဖတ်ပြီးရင်တော့သူပါလိုက်ရေးတော့မယ်ထင်တယ်။
ဂျူဂျူ မပြောနဲ့ သမီးလဲtsweet ပိုစ်ကိုဖတ်ပြီး blogs ရေးချင်နေတာ
ko9February 1, 2013 at 11:58 PM
အငယ်ကောင်တော့ ကကြီး ခကွေး၇သွားပြီ။
ကလေးတွေ ကိုမြန်မာစာ သင်တော့မှပဲ
San San Htun February 2, 2013 at 2:01 AM
ဂျူးဂျူးလေး မြန်မာစာ သင်တာ ရယ်လည်ရယ်ရ..သူ သင်ချင်စိတ်ချင်တာ ချီးကျူးစရာပဲ..သူ့ မေမေ ဘလော့ကို ဖတ်ပြီး သူ့ မေမေလိုပဲ စာရေးကောင်းပါစေဗျား..း)
Aunty Tint February 3, 2013 at 1:18 AM
ဆရာမမေမေ ကိုယ့်ရှူးကိုယ်ပတ်နေပုံရတယ် ဟိဟိ။
ဆွိတီကတော်ပါပေတယ်။ တီတင့်ရဲ့ စင်္ကာပူမှာနေတဲ့
တီတင့်ရဲ့ ညီမအငယ်ဆုံးမှာ သမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်
စာတတ်ဘို့နေနေသာ မြန်မာစကားတောင်မပြောတတ်ဘူး :(
မြသွေးနီ February 20, 2013 at 7:59 PM
အမေနဲ့သမီးစာသင်နေတာ ဖတ်ပြီး ရယ်မိပါရဲ့..
တကယ့် ကမောက်ကမ အဖြစ်အပျက်တွေက ဖန်တီးထားတဲ့ ပြက်လုံးတွေထက် ရယ်ရတယ်ဆိုတာ ဒါပဲနေမှာ...
သမီးလေးကို မြန်မာစာတတ်စေချင်တာကိုလဲ သဘောကျမိပါရဲ့..
သင်ယူနေတဲ့ သမီးလေးကလည်း လိမ်မာပါဘိနော်..
Feel free to surf to my webpage louis vuitton surya
Look at my web blog michael kors watches
Unknown March 9, 2013 at 5:21 PM
Feel free to visit my web-site - christian louboutin sneakers
တန်ခူး April 4, 2013 at 11:45 AM
ဟုတ်ပါရဲ့သူငယ်ချင်းရေ. ကလေးတွေအတွက်တော့ တချို့ စကားလုံးတွေမှတ်ရလက်ပေါက်ကပ်တယ်နော်. သားလဲ အဲလိုမေးရင် ချက်ချင်းအဖြေပေးနိုင်ဖို့ အတော်စဉ်းစားရတာ. တချို့ စကားလုံးတွေကျတော့ အပြောကနေသင်တာ ပိုမြန်သလိုပဲနော်
ဒေါ်ဒေါ်စု April 15, 2013 at 8:59 PM
ကြည်ဖြူပိုင် April 18, 2013 at 10:03 PM
အန်တီတင့် April 28, 2013 at 4:09 PM
နှစ်သစ်မှာ post အသစ် မရှိတဲ့ TTSweet blog ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
NANG ZABAI May 3, 2013 at 9:02 PM
Pls upload new post.. Waiting
maynyeinchan May 13, 2013 at 3:35 PM
maynyeinchan May 13, 2013 at 3:36 PM
tae tae May 14, 2013 at 12:57 AM
Are u busy?Take care:))
Please upload new post...... We are waiting!
tae tae June 20, 2013 at 12:49 AM
TT Sweet ,
Are you still busy?Take care:)))
Anonymous September 18, 2014 at 6:45 PM
TT Sweet, ဂျူဂျူလေး အကြောင်း update တွေ မျှော်နေပါတယ် ... သမီးလေး တော်တော် ကြီးလောက်ရောပေါ့ ... စလုံးကနေ အခု မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်နေတဲ့အထိ TT Sweet ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ အားပေးလာတာပါ ... ဂျူဂျူလေးကိုလည်း ချစ်လို့ .... :))